Gaa na Switzerland ọhụrụ: Ụlọ oriri na ọ Opeụ Robụ nke Robots achọghị okporo ụzọ na ụgbọ ala, kama Lamas, Ewu na ihe nkiri na -agba ume.
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Gaa na Switzerland ọhụrụ: Ụlọ oriri na ọ Opeụ Robụ nke Robots achọghị okporo ụzọ na ụgbọ ala, kama Lamas, Ewu na ihe nkiri na -agba ume.
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ebe E Si Nweta Foto: Elisabeth Lang
Ọ bụ ọchịchọ ịmata ihe, ohere ịkparịta ụka n'Ịntanet, mkparịta ụka azụmaahịa wetara ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ overụ 100ụ na ndị mmekọ ngosi ihe karịrị 600, na-ejikọ ọnụ ụlọ ọrụ nkwari akụ mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị XNUMX nke ọnụnọ dị jụụ n'ihi mgbochi Corona na-adịghị agwụ agwụ.
Halle 550 na-anọghị ebe a na-ahụkarị ma na-adọrọ adọrọ 5-star Hotels Venues na Zurich, ebe a na-enwekarị ụdị nzukọ a.
Nnọkọ ọbịa nke Hotellerie Suisse mbụ nke Switzerland nke Hotelrevue, mbipụta azụmahịa mpaghara dọtara, sonyere ndị sonyere 1152 n'izu a.
Ihe omume ahụ gosipụtara mkpa mkparịta ụka onwe onye n'ime ụwa ọhụrụ anyị nke digitalization na ọfịs ụlọ.
550zọ XNUMX Ọ bụ ebe egwuregwu na Zurich Oerlikon.
Mgbakọ ile ọbịa bụ ụdị mbụ na Switzerland kemgbe COVID-19 ghọrọ ọrịa na-efe efe na Machị 2010
Iji chekwaa ndị ọbịa, onye ọ bụla ga -egosi akwụkwọ ịgba ọgwụ mgbochi (green Pass). Maka ndị anaghị agba ọgwụ mgbochi, achọrọ nyocha COVID-19 na-adịghị mma.
N'ụzọ dị ịtụnanya na enweghị amụma mkpuchi ihu, mgbe ọ gafesịrị ebe nlele n'ime Halle 550. Nke a hapụrụ ndị dọkịta ntakịrị obi abụọ mana ndị sonyere nwere oke obi ụtọ.
Maskless kama iku ume - na -ekwekọ mmegharị ahụ.
“Ka mma ọnụ” bụ kredit Onye isi ala Hotellerie Andreas Züllig n'okwu mmeghe ya.
“Ọ dị anyị mkpa ịzụlite atụmatụ ọhụrụ gbasara ọrịa na -efe efe, dị ka anyị ji echiche okike wee were njikwa nsogbu. Dị ka ndị na -ewu ụlọ na ndị ọchụnta ego, anyị abụghị naanị ndị isi kamakwa ndị na -amata ọnọdụ na mmetụta nke ihe ga -ekwe omume ma na -eme ihe n'echiche.
Kedu ka njem nlegharị anya Switzerland ga -adị ka ọ gbasasịrị ọrịa?
Mana ihe ụlọ ọrụ ile ọbịa, ndị na -anya ụgbọ elu, na ndị njem nlegharị anya dị mkpa bụ ahịrịokwu nchekwube.
Enwere ọtụtụ okwu gbasara ihe ọhụrụ na digitalization, mana gịnị ka ndị sonyere chọrọ n'ezie?
Robot maka ịbata?
Nke a agaala ma a tụlere ya ọtụtụ afọ gara aga. Kedu ihe anyị chọrọ n'ezie na ụwa nke oria ojoo a mechara?
Naanị ihe anyị chọrọ mgbe ọtụtụ mkpọchi mkpọchi nọrọ n'ụlọ bụ ịmakụ.
Nye ndị ọbịa ịmakụ!
Ndị njem na -achọkarị nnukwu ọchị na nnabata nnabata n'ikuku dị mfe dịka ọ dị.
Agbanyeghị, ezigbo ihe ọhụrụ bụ minibar robotic (nke Robotise, Germany) na -ebute mmanya ọ chọrọ ozugbo n'ime ụlọ ndị ọbịa.
Ajụjụ m ole ka robot a ga -efu?
Azịza dị mfe bụ ọnụ ahịa robot dị ka onye na -eke nri.
Mana nke a nwere ike ịdị iche site na ebe a na-akwụ nnukwu ụgwọ nke a na-akwụ na Switzerland na ụgwọ ọnwa akwụ na mba ndị dị ọnụ ala, dịka na Eshia.
Mana ọ dị mma ịnwe roboti na -ekpuchighị ya na -abịa na -enye gị ihe ọ drinksụ duringụ n'oge ọrịa, na -ahapụkwa ọzọ n'ime ogologo oge ka batrị na -adịgide?
Mkparịta ụka panel na ndị na -ekwu okwu 84 were igwe okwu bụ isi ihe dị na nnọkọ ọbịa nke 2021
Urs Kessler, onye isi ala Jungfrauen Bahnen kwuru na mkparịta ụka oge ahịa ahịa mba ụwa ga -alọghachi kụrụ ndị njem.
Enweghị amụma ọ bụla.
Ahịa ụlọ Switzerland sitere na afọ gara aga (2020) adaala.
Ndị Switzerland na -aga mba ọzọ. Agbanyeghị, njem nlegharị anya Switzerland na -enweta ọnụọgụ dị mma site na Germany, Belgium na UAE.
Tupu oria ojoo a, Switzerland nwere ihe karịrị 70% ụlọ ndị ọbịa nke ndị ọbịa si Eshia bi.
Nlaghachi nke ndị ọbịa China mgbe egwuregwu Olympic ga -adị mkpa. Switzerland nwere ọrụ abụọ na -ekwe nkwa na Eshia maka afọ na -abịa. Njem nlegharị anya Switzerland nwere ndị ọrụ nkwado dabere na China, India, Southwest, na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia. Dị ka ndị na -eme nchọpụta si kwuo, enwere nnukwu njem maka mpaghara ahụ.
Ahịa dị ka India, South East Asia, na Brazil ga -alaghachi. N'ezie India ga-abụ onye na-agbanwe egwuregwu na Switzerland. Mana ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ isi okwu jikọtara ya na nhazi visa dị mfe ma dị mfe.
Halle 550 na Zurich: Ebe nzuko ọbịa
Anyị na-ebi n'ọchịchị aka ike site na ịghara ịgba ọgwụ mgbochi Dieter Vranck CEO nke Switzerland International Airlines kwuru: 90 % nke Cabin Crew anyị bụ ọgwụ mgbochi mana anyị ga -egboro ndị na -agbaghị ọgwụ mgbochi.
Ọnọdụ na -agbanwe agbanwe mgbe niile mgbe ị na -eme njem bụ nnukwu nsogbu. Ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa bụ tiketi dị mkpa iji nweta ọnọdụ siri ike. Ọtụtụ ụgbọ elu efu, mana ozugbo ebuliri kwarantaini - akwụkwọ ntinye akwụkwọ na -agbada ngwa ngwa.
Ọ dabara nke ọma, anyị na -enweta ọtụtụ ìgwè na -esite na United States. Olu ndị ọbịa si Amerịka dị elu karịa ka ọ dị tupu ọrịa ọjọọ.
Mana anyị enweghị ike ịga Amerịka, anyị enweghị ike ịga n'ihu na -enweghị njem na USA ogologo oge. Enweghị ụgbọ elu Cargo, anyị ga -enwe ụgbọ elu efu na ọkara nke ụzọ US anyị.
Ụgbọ elu azụmaahịa ga -eji nwayọ nwetaghachi mana anyị na -atụ anya mwepu nke 30 % ruo 2023. Anyị nwere afọ ndekọ na 2019 na -erite uru nde 53.
Afọ 2022 agaghị alaghachi na nkịtị- mana Europe na-etolite; Ebe nke abụọ na USA na ebe nke atọ Asia na -akọwa Vranckx. Anyị nọ n'ọnọdụ ebe anyị na -enweghị ike itinye ọtụtụ n'ime ihe ọhụrụ.
Airfares ga -adịgide, Vranckx, onye isi Switzerland kwuru.
Nnọkọ ile ọbịa 2021
Ọ bụ ezie na Martin Nydegger, Director nke Njem Nleta Switzerland, na -arịọ mmadụ niile na -asị: “Gba ọgwụ mgbochi, ọ dịghị mma mana ọ dị mkpa.” Anyị enweghị oge ichere na mpaghara anyị. N'ime njem nlegharị anya agwụla.
Nydegger kwenyesiri ike na ahịa mba ụwa ga -alaghachi site n'afọ 2023. Switzerland bụ mba kachasị maka ndị ọbịa. Ọ nwere ogo, ọ bụghị ajụjụ ahịa.
Maka azụmaahịa MICE, oge 2019 kwụsịrị nke ukwuu.
Ọ nweghị ihe dị ka nke ahụ fọdụrụ na anyị na -ekwu maka olu dị obere 5 % na 2021.
Ọ na -ewekwa ndị ọrụ ole na ole ugbu a.
Mana azụmahịa òké nwere ike ịlanarị?
A ga -amanye ụlọ ọrụ nkwari akụ MICE dị na Switzerland ka ha debe akwụkwọ site na ikpo okwu dị ka booking.com, elekere, ebe ndị na -eto eto nwere ike ịga Google ka ha debe ụlọ ọgbakọ ọgbakọ.
48% nke ntinye akwụkwọ na -eme mkpanaka site na iji nyiwe dị ka ekwentị kwekọrọ. Enwekwara ike ịde akwụkwọ ụlọ oriri ọgbakọ site na Amazon, ma ọ bụ Nzukọ Nhọrọ, nke na -enwe nnukwu mmetụta na ndị na -eme nzukọ.
Award Hotel nke Afọ e gosipụtara Nadja na Patric Vogel nke Fairytale Hotel Braunwald (4 Stars).
Enwere ọtụtụ okwu gbasara ihe ọhụrụ na digitization, mana ụlọ nkwari akụ a enweghịdị ụzọ iji ruo ebe ahụ.
Braunwald enweghị ụgbọ ala.
Braunwaldbahn na -ewe gị ihe dị ka ọkara awa ọ bụla site na ọdụ ndagwurugwu. Lamas, Ewu na -ekele gị mgbe ị na -agafe "àkwà mmiri Ewu ọla edo".
Anụ nwere anụrị, oke ọkụkọ oke bekee na -ama jijiji, na ọmarịcha ebe na -echere gị.
Kedu ihe kpatara Fairytale Hotel?
Ogologo oge gara aga, obere nwa nwanyị na -ebe ákwá n'oké ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma kwụsị mgbe onye nwe ya Fridolin Vogel kwere nkwa ịkọ akụkọ ya.
Ruo taa, ọdịnala a ka na -ebi ma na -eme kwa ụbọchị Nadja an Patric Vogel. Ọfọn kwesịrị! EKELE!
India njem na njem nleta chere nsogbu nsogbu akụ na ụba ihu